राहत बाँड्दा सेल्फी खिच्ने सेलिब्रेटी | Filmy Bazar in Nepal
२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पको ताण्डव नृत्यले सिर्जना गरेका विध्वंसका दृश्यहरूले समाचारपत्रहरू भरिएका छन्। भत्किएका गाउँहरू, सोत्राम् भएका घरहरू र भग्नावशेषमा थिचिएका शवहरूको ह्दयविदारक दृश्यहरू टेलिभिजनका माध्यमबाट घरघरमा सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यस्ता कारुणिक दृश्यहरू हेर्दाहेर्दै दस दिनपछि ‘सेलिब्रिटी’ का दुवै आँखा रसाएर आउँछन्, मुटु भक्कानिन्छ र शरीरभरि एैठन हुन्छ। ‘नेपालीलाई परेको यस्तो विपत्का घडीमा मजस्तो सेलिब्रिटीले पनि आफूले सकेको मद्दत त गर्नैपर्छ’ भन्ने विवेकले उनीहरूलाई घच्घचाउँछ। सञ्चार माध्यमका टेलिफोनका घन्टीहरू बज्न थाल्छन् । भूकम्पपीडितका बस्तीमा उद्धार र राहत सामग्रीसहित महासेलिब्रिटी ‘फलाना’ भोलि बिहान प्रस्थान गर्ने समाचार सञ्चार माध्यमहरूले प्रमुखताका साथ प्रचार प्रसार गर्दछन्। समाचारबाट प्रभावित भएर मैले दानवीर सेलिब्रिटीको सत्कर्मलाई हेर्ने आफ्नो जिज्ञासा रोक्न सकिनँ। भ्याटभ्याटेमा चढेर भोलिपल्ट बिहानै म काठमाण्डौ छेउको बस्तीतर्फ प्रस्थान गरें।
गाउँ पुग्दा अनौठो दृश्य देखियो। भूकम्पले भत्किएर धराप भएका घरहरूको अग्रभागमा सेलिब्रिटी नै सेलिब्रिटीको मेला लागेको रहेछ– कलाकार सेलिब्रिटी, राजनीतिज्ञ सेलिब्रिटी, व्यपारी सेलिब्रिटी, उद्योगपति सेलिब्रिटी, समाजसेवी सेलिब्रिटी, सामाजिक अगुवा सेलिब्रिटी आदि आदि। एकजना महिला सेलिब्रिटी भत्किएको घरले पुरिएर उद्धार गरिएकी बालिकालाई काखमा राखेर धुरुधुरु रुँदै बिस्कुट ख्वाइरहेकी थिइन्। अर्का पुरुष सेलिब्रिटी एकजना वृद्धलाई प्लास्टिकको पाल दिदाँदिंदै बिचमै टक्क रोकिन्छन्।
सेल्फीको डन्डी सोज्याउँदै तस्बिर खिच्नका लागि मुसुक्क हाँसेर पाल हस्तान्तरण गर्दछन्। सेल्फीले राहत वितरणको दृश्य कैद गरिसकेको हुन्छ। मलाई भने खपिनसक्नु भयो। यस्तो राष्ट्रिय विपत्का बेलामा पनि संवेदनाविहीन भएर सिनेमाको सुटिङ गर्ने कम्पनीलाई मनमनै धिक्कारें। छेउमै उभिएको पीडितलाई सोधें, ‘यो कुन सिनेमाको सुटिङ गरेको?’
पीडित : कहाँ सिनेमाको सुटिङ हुनु। यो त साँच्चिकै राहत सामग्री बाँडेको क्या।
एकाएक वातावरण खलबलियो। टीभी, समाचारपत्र, अनलाइनका सबै पत्रकारहरू छार्तास ठोकेर बाटोतर्फ कुदे। मैले फेरि भुईंचालो आएछ भन्ने ठानें। सधैं ब्रेकिङ न्युज मात्र देखाउने टीभीहरू भूकम्पको क्षतिको नयाँ र ताजा दृश्य खिच्न दोडिएको अनुमान गरे। ज्यान जोगाउन म पनि पछि पछि भागें। बाटोमा एउटा कारअगाडि पुगेपछि पो मैले कुरोको चुरो बुझें। कारबाट महासेलिब्रिटी ओर्लेको दृश्य खिच्न पहिला हुने दौडमा पत्रकारहरू लागिपरेका रहेछन्। भत्केको बस्तीअगाडि चामलको बोराहरूको थुप्रो लगाइएको थियो। बोराअगाडि राहत लिन जम्मा भएकाहरूको भीड थियो। महासेलिब्रिटीसँगै उभिएर आईएनजीओका ‘कन्ट्री डिरेक्टर’ ले संक्षिप्त भाषण गरे, ‘भूकम्पपीडितहरूलाई हाम्रो संस्थाका तर्फबाट रु. एक करोडको चामल वितरण गरिंदैछ, जुन कुहिएको छैन।’ त्यसपछि महासेलिब्रिटीले राहत वितरण शुभारम्भ गर्ने तयारी गर्दै खल्तीबाट रेबनको कालो चस्मा झिकेर लगाए। खुम्चिएको लुगा तानतुन पारे। चामलको बोराअगाडि उभिए। कुन पोजमा राहत वितरण गर्ने भनेर एकैछिन अक्मकिए पनि। उनलाई झल्यास्स आफ्नो पिताजीको श्राद्ध गर्दा पुरोहितले पैसा हालेको दुनालाई कुश लिएर समाउँदै गौदान गराएको दृश्यको सम्झना भयो। सोहीअनुरूप गौदान गर्दाकै मुद्रामा चामलको बोराको कुनो समाउँदै खिसिक्क हाँसेर समाए। अनि एक वृद्धको हातमा उक्त बोरा छुवाइदिए। सबैले ताली बजाए।
दानवीर महासेलिब्रिटीको उदार मन यतिमात्रले सन्तुष्ट भएन। उनी आफ्नो गाडीतर्फ लागे। गाडीभित्र टनाटन भरिएको झोलाबाट एक प्याकेट चाउचाउ र एक पुरिया बिस्कुट झिकेर दुईजना बालक, बालिकालाई बाँडिदिए। सबैले फेरि ताली बजाए। भोलिपल्ट बिहान राष्ट्रिय दैनिकहरूको मुखपृष्ठमा महासेलिब्रिटीले गौदान गरेको चामलको बोरासहितको तस्बिर छापियो । जसको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, ‘महासेलिब्रिटीबाट आफ्नो गाँस काटेर भूकम्पपीडितहरूलाई रु. एक करोडको चामल वितरण।’ पत्रपत्रिका पल्टाउँदै आत्मसन्तुष्टिमा महासेलिब्रिटी मुसुक्क मुस्कुराउनुभयो र एक्लै बरबराउनुभयो, ‘आपत्मा परेका नेपालीलाई सेलिब्रिटीले नगरे कसले मद्दत गर्छ त?’
Previous: असारमा नेफ्टाले चलचित्र महोत्सब गर्ने | आठौ नेफ्टा एवार्डका गृहकार्य सुरु
Next: फेसबुकमा चाउचाउ बाँडेको फोटो हाल्दैमा समाजसेवी हुने र ?: राजकुमार राई